Ikhaya / Blog / Ingqele Igagasi Kwakhona! Iimveliso zegumbi lokuhlambela, Ungawuthintela njani ubanda?
2021 / 04 / 11 uhleloBlog 5990 0
Izihloko zegumbi lokuhlambela
Iliza alikapheli, iliza liqale kwakhona, umoya obandayo onamandla ukubuyela!
Imozulu iyabanda, ukongeza ukuba abantu mabaqwalasele ukufudumala kwaye bongeze iimpahla, izinto ezicocekileyo ekhaya nazo mazibe zezona zinto ziphambili ekungqandeni. Amanzi angaphantsi kwe- -4 degrees celcius, umthamo weqhwa uyandiswa, ngokulula kukhokelela kwiimveliso zempahla yococeko ngaphakathi komkhenkce kunye nokwandiswa kwamanzi kwaye ngenxa yoko kunyuka iimveliso. Ndikuthumela i-sanitary ware anti-freezing tips!
Izindlu zangasese zasebusika ukunqanda ingqele kunye nokuqhekeka kwamanyathelo okhuseleko
Ebusika, iingcango zegumbi lokuhlambela kunye neefestile zivaliwe okwethutyana ukumisa umoya ongenisa umoya kunye nokugcina iqondo lobushushu langaphakathi. Ukuthintela ukubanda, nceda ukhulule onke amanzi aseleyo xa indlu yangasese ingasetyenziswa.
Indlela kunye namanyathelo ngala alandelayo: vala i-valve yokungena, ukhulule kwaye ususe i-bolt ye-drainage, kwaye uqinise i-bolt yokuhambisa amanzi emva kokuba kukhutshwe amanzi aseleyo, kungenjalo kuya kubangela ukuvuza kwamanzi.
Kuza kubakho amanzi kwindawo ejikajika amanzi yangasese yangasese. Sebenzisa iingubo zesiponji kunye nempompo ukufunxa amanzi ukuze ungagodoli kwaye uqhekeze indlu yangasese ixesha elide.
Ukongeza, ungagalela i-antifreeze kwitanki lamanzi, okanye emanzini usele utywala, ityuwa, inokunciphisa indawo yokuqandisa amanzi, kodwa kunye ne-anti-freeze esebenzayo. Ukuba igumbi lokuhlambela livulelekile kwinkqubo yokufudumeza, kwaye unokuqinisekisa ukuba igumbi lokuhlambela alizukubanda, awunakongeza isinqanda mathe kwindlu yangasese.
Amanyathelo okulondolozwa kwesinki ebusika
Ngokukhawuleza emva kokusetyenziswa, yome nge-rag eyomileyo ukunqanda ukuqhekeka komphezulu okubangelwa ngumkhenkce. Xa ucoca, musa ukusebenzisa izixhobo zococeko ngentsimbi ukunqanda ukukrwela umphezulu wesinki. Kwimeko yeqondo lobushushu langaphakathi eliphantsi, unokukhetha ukugubungela isinki ngengubo yelaphu ukuyikhusela kuphuka ngenxa yeqondo lobushushu eliphantsi.
Amanyathelo okulondolozwa kwebhafu yasebusika
Okokuqala, emva kokusetyenziswa ngakunye kwebhafu, gcina ibhafu yomile, ukuze ingabangeli deformation yexesha elide lamanzi amanzi okanye umphezulu kwaye awunakusetyenziswa. Ngexesha lokucoca, musa ukusebenzisa i-asidi eyomeleleyo kunye nealkaline zokucoca ukuthintela ukubola komphezulu webhafu. Sula ngelaphu elithambileyo ukuze ungabangeli imikrwelo, kwaye ukuba kukho ukukrala kancinci ngengozi, kwangoko khazimlisa umphezulu ukuze ubuyisele ukuguda. Musa ukubeka izinto zesinyithi kumphezulu webhafu ukuthintela ukurusa okanye ukonakala komphezulu kwibhafu, ifuthe kubuhle bayo kunye nokusebenza kwayo.
Amanyathelo okhuseleko lokugcina ikhabethe ebusika
Kwigumbi lokuhlambela emva kokuhlamba, kufuneka ubekhona ngexesha elifanelekileyo kwigumbi lokuhlambela lekhabhathi, emanzini osula acocekile. Iikhabhathi zangasese zihlala zibekwa kwisepha ethile, ukuhlanjwa kobuso, ishampu kunye nezinye izinto zokucoca, ukuba ngengozi iphume, kungcono ukucoca kwangoko, izinto ezinobunzima kufuneka zibekwe emazantsi kwikhabhathi yegumbi lokuhlambela. Xa ucoca ikhabhathi yangasese, ungasebenzisi ucingo lwesinyithi, ilaphu likaPasteur, ukukhuhla imichiza ngamandla, kwaye ungasebenzisi manzi ukunqanda ukubola. Sebenzisa ngokufanelekileyo ucoceko olungathathi hlangothi kunye nolunye ugcino lweemveliso zobungcali.
Amanyathelo okhuseleko okuthintela ukungabinamakhaza
(1) itephu yombhobho iqhekeza unobangela.
℃ ngezantsi kokusebenzisa okusingqongileyo, kubandakanya kodwa kungaphelelanga kwezi zizathu zilandelayo.
1, emva kovavanyo lwangaphambi kwamanzi, ipompo emanzini aseleyo ayifakwanga.
2, ufakelo lwemipu ngaphandle, ungavali i-valve yokungena kwamanzi, kwaye khange uyenze ukhuselo lokukhuseleka.
3, umniniyo akakho eholideyini okanye akahlali ixesha elide, igumbi alifudunyezwanga, khange livale ivalve yokungenisa amanzi ukukhupha intsalela yamanzi. Umnini ugqibile ukulungisa igumbi lokungenisa umoya, iifestile bezingavalwanga ebusuku, kwaye ivalve yokungenisa amanzi ibingavalwanga ukukhupha amanzi aseleyo etephini.
(2) Indlela yokuthintela amanyathelo.
℃ ngezantsi kokusebenzisa okusingqongileyo, kubandakanya kodwa kungaphelelwanga kulumkiso lulandelayo.
1, indawo ubume ufakelo itephu yeteksi lobushushu ezifana ngezantsi 0 ℃, kucetyiswa ukuba okwexeshana ukufaka itephu okanye efakwe kwi non-amanzi yethutyana, okanye ityala amanzi emva ngocoselelo amanzi umbhobho.
2, ebusuku kufuneka ivale iifestile zasekhitshini, igumbi lokuhlambela ngaphandle kunye negumbi elingasemva elinomthunzi ukuqinisekisa ukuba iqondo lobushushu langaphakathi lingaphezulu kwe-0 ℃.
3, kwigumbi apho iqondo lobushushu langaphakathi lingaphantsi kwe-0 ℃, vala ivalve yangaphakathi yemitha yamanzi kwaye ugqibe ukukhupha amanzi aseleyo kumbhobho.
4, iqondo lobushushu ngaphakathi lingaphantsi kwigumbi le-0,, kufuneka uvule ukufudumeza, gcina ubushushu ngaphezulu kwe-0 ℃.
5, ungasebenzisa amalaphu omqhaphu kunye nelineni, iimpahla ezindala zomqhaphu, uboya bekotoni kunye nezinye izinto zokwambathisa ukujija kunye nokusonga itywina eliqinileyo.
Ngaphambili :: Faka iishelufu kwindlu yangasese, kwigumbi lokuhlambela kwangoko phila ngaphezulu kweemitha ezi-5 zesikwere! next: Igumbi lokuhlambela endlwini, khetha ukuba ungene kwigumbi langasese lodonga? Okanye iNdlu yangasese yoMgangatho?
2021 / 04 / 12 6654
2021 / 04 / 12 6544
2021 / 04 / 12 5553